Akunabo bonke abantwana abakhulayo abanomusa, abafundisayo nabathobelayo. Ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba abazali babonakale bekhuphula abantwana babo ngokuchanekileyo, kodwa unyana okanye intombi ihlala ixhalabile ngeendlela, ukuziphatha okungenakulinganisela kunye nobudlova. Abantwana abanjalo bavame ukuba banomdla wecandelo lomngcipheko. Abayithandiyo enkulisa okanye kwindawo yokudlala. Kubonakala ngathi akunakwenzeka ukulawula kunye nosana kwaye lixesha lokumkhokela kumntwana weengqondo okanye yengqondo. Kodwa ngaba ufanele ukukhawuleza ukubeka uphawu kumntwana wakho? Iindlela zokukhulisa abantwana abasengozini zingasetyenziswa ngabazali ngokwabo kwiimeko eziqhelekileyo zasekhaya.
Kwi-arsenal yeengqondo, zizinzile iindlela ezinje zokukhulisa abantwana engozini, njengemidlalo kunye nobugcisa bezobugcisa. Ezi zixhobo "ziboniswa" kwaye ziyabangalisa, kwaye zihlambalaza, kunye nabantwana abangenasifo esinokukhathazeka ngengxaki. Ukumodareyitha, ukudlala, ukudansa, ukudweba ngamaxesha amaninzi amayeza asebenzayo, izixhobo zokufundisa ezifanelekileyo. Awuyi-psychologist kwaye ungenazo ezi ndlela? Ubuchule bakho buninzi. Uyaqonda kwaye uzive ukuba umntwana wakho uphezulu kakhulu kuneengcali ezinamava. Yingakho uza kukwazi ukujamelana neengxaki ezininzi ukuba ufunde ngokuzenzekelayo kunye neenjongo zokudlala nomntwana wakho.
Into yokuqala yokwenza ukulungiselela isethi yamathoyizi adingekayo kwi "imidlalo kunye ne-subtext". Ungesabi - akukho nto inzima kule nto. Nangona kuyimfuneko, uhlome uluhlu, uchithe ixesha lokuqokelela "iprops" kunye nabo bonke abalinganiswa. Uya kuyimfuneko:
• Intsapho yase-puppet - unyana kunye nentombi, unina, uyise, umntwana, ugogo nomkhulu, kunye nomalume kunye nonina;
• Abahlobo bamatye "intombi" okanye umhlobo "unyana";
• Abalinganiswa abanobuso obukrakra nobubi obuya kuba ngummelwane oqhekezayo owake wamoyikisa, okanye inxaxheba yothisha ongathandekiyo;
• amadonki anomntu onobubele novuyo - ngenxaxheba yothisha olungileyo, umlingo okanye umlobi wenkosi, i-princess okanye inganekwane;
• isethi yempahla;
• Amanani aseHero: inkosana enobugorha (yamantombazana), iHulk, iSpiderman (kubafana);
• amaqhawe amanqabileyo - ubuninzi bezilwanyana ezimbi, iirobhothi, abafokazi;
• amakhwenkwe - isethi yamajoni, amatanki, iimoto, iiplanga, izigubha okanye i-sabers;
• kumantombazana - izilwanyana ezincinane ezihlekisayo, eziyimfuneko, zinokwenza nayiphi na indima ebhaliweyo;
• ii cubes apho ungakha indlu yokudlala kunye nenqaba;
• iphepha elinemibala, iplastiki, iibhulashi, amapende, amanqaku, i-albhamu yokudweba.
Nangona kunjalo, nokuba ngaba abazali baqokelele isiqingatha sazo zonke ezi ngasentla, oku kuya kubakho ukuqala.
Ukuba abantwana bahlaseleyo xa besidla
Ngokuqhelekileyo, abantwana abaneentloni ezivela kwiqela elijongene nobungozi bangenasisiseko nangaliphi na isizathu. Intombazana yakho ayikwazi ukuyondla, ayincede naluphi na ukukholisa? Ewe, makhe umntwana namhlanje abe ngumpapa - umpheki okanye unina, ophethe intsapho yakhe. Sifumana isethi yamadonksi kwi-suitcase magic. Hlanganisa zonke iipopi ezungeze itafile yedonsa, faka ibhokhwe elungileyo. Yenza umoya wokuzonwabisa, ukugubha kunye nokuzonwabisa. Ngenxa yoko, yiva ilizwi lezinto ezenzekayo, kuba umntwana ngokwakhe akwazi ukuba njani. Kodwa kufuneka uzame: "Siza kufaka izitya ezintle kakhulu, simema iintwendwe endlwini yethu, silungiselela konke okumnandi, okungenakusihlwa. Njengoko wonke umntu uthanda i-cutlets, uTata ucela izibonelelo! Kwaye, mzalwana, jonga, ngokuba izibini zombini zilahla i-buckwheat gruel! Uya kumnika izibonelelo kwaye ujabule ukuba wonke umntu unomdla kakhulu! Ngaba ugogo ufuna ukumnika inqanawa yenkukhu? Khetha ukhetho olungakumbi. Yona indlela avuya ngayo, atshaba! Kuhle ukuba nesidlo esimnandi! "
Ngexesha elilandelayo, dlala nomntwana ekulungiseleleni isidlo sakusihlwa. Ngethuba ekumnikeleni ukuba ahloniphe iinqatyambo eziqhakazile, ndixelele indlela yokuyipenda isiqwenga se-beet, zivumele ukuba uhlambe ityhula yenyama. Nika intsapho yeepopi kunye nosana ukuba unambitha i-apple enesantyambo. Ngalo mdlalo ulolonga umonakalo omhle womntwana, ukulindela okulungileyo. Uya kubona, ngokukhawuleza isimo sakhe sengqondo ngokutya siya kutshintsha.
Ngaba ukhathazekile ngokuqhambuka kobugwenxa nokucaphukisa okuqhubekayo kubantwana abasengozini? Umntwana uphendulela intshontsho kumakhulu wakhe, ezama ukunyanzelisa ummelwane wakhe ngebhokisi lebhokisi, ufike ngqo esifubeni. Kwaye utitshala uyakhalaza ngaye. Uhlazisa umqhubi, uchaza ukuba awukwazi ukwenza oku, kodwa ukuziphatha kwakhe akutshintshi. Kubonakala ukuba, umntwana unesizathu sentshukumo kunye nentukuthelo, awukwazi ukuyiqonda okwamanje, kuye okanye kuyo. Kwaye akayizi indlela yokubonisa iimvakalelo zakhe ukuze ziqondwe, kwaye ungabangeli nzakalo umntu. Nala kwakhona, indlela ephakamileyo yokukhulisa abantwana (kwaye kungekhona nje iqela lomngcipheko) - umdlalo - unokuza kuhlangula.
Ngaba uqaphele ukuba umfana onomsindo uthatha umpu kwaye uyakuchukumisa ngenxa yokuba wenqabe into okanye ujeziswe? Musa nje ukuthatha isikhali, ungandixeleli ukuba unqanda ukuvalwa, ukuba abantu abavunyelwe ukudubula. Okungcono kwimfundo kuya kunceda ukungaqiniseki ukuba umntwana uvinjelwe, kodwa ibinzana elilula: "Uyacaphuka." Vumelana, oku kukhutshwa kunye nomphumo weemvakalelo kungcono kunokuba uzame ukubetha okanye ukuluma. Dlala kunye nomntwana kwimfazwe, kwaye unike iqela eliya kumntwana. Kule meko, i-suitcase yemilingo inceda. Fumana amajoni. Myeke umntwana aphonse umsindo wakhe kwizitha zokudlala: uyityebe ngamathangi, ukudubula, ukuhla ehlathini, kodwa nje ukutsala iindlebe zakhe kakuhle. Ibom ixinzelelo kumaphephandaba endala nayo yindlela ehle kakhulu yokunciphisa umphefumlo.
Abantwana beqela elijongene nobungozi banokufumana ulonwabo oluninzi xa uthabatha intshaba elibi, kwaye "utshabalalise" it, ngokugqithiseleyo nangengenangqiqo epeyinwe ngopende olumnyama. Akuyi kuba kubi ukwenza i-monster ephuma kwiplastiki, kwaye i-flatten, i-crumple, iyichithe ibe yinto ehlukeneyo. Izwi ngokwalo mdlalo utshatyalaliswa yinto yokuqhaqhaqhayisa - le yithuba lakho lokubona oko kubangela ukuba umntwana abe nobundlobongela. Vumela inkomo ukuba icele inceba, yakhala kwaye ubuze isizathu sokuba bamjezise. Ngenxa yokunyanzeliswa ukuthobela nokuthobela? Okanye ngaba bahlala bexela kunye nokufundisa, amathoyizi athatyathwa? Umntwana, emva kokuva "inguqu echanekileyo", uya kuqinisekisa ukuba ngamazwi okanye ukuveza imvakalelo. Ngokukhawuleza ukuzola. Ngaloo ndlela, awuyikufundisa kuphela umntwana wakho ukuba aveze iimvakalelo zakhe ezingekho phantsi kwimo ekhuselekileyo, kodwa unokukwazi ukumnceda njani ukumelana nobunzima.
Imithetho ephambili yokukhulisa abantwana abasengozini
Ukuze iimidlalo ezidibeneyo zancedise umntwana, abazali kufuneka bahambisane nemithetho emininzi:
- Yinyamekela kwaye ube nobungane kwimigqomo yeemvuthu, ungagxeki umdlalo wakhe.
- Zenzele ngokuqinisekileyo. Intshiseko kunye nenjabulo yakho iya kudluliselwa kumntwana.
- Ngenye indlela umdlalo, ukudweba, ukulandelelanisa - uza kubona ukuba uluphi uhlobo lweemvakalelo ezikufutshane nomntwana wakho.
- Musa ukunyanzelisa i-karapuza ukuba idlale. Ukuba ubona ukuba ulahlekelwe ngumdla okanye akanelisekanga ngento ethile, tshintshe ingqalelo kwenye into.
Ukulandela iindlela ezilula ekukhuliseni abantwana abasengozini, ungabafundisa ukuba baphendule ngokwaneleyo imeko ezixakalisayo kwaye bavakalise kakuhle iimvakalelo zabo. Ukuba usondela kwimeko njalo kwaye usebenzisa iindlela zezemfundo rhoqo, emva kweminyaka embalwa uyakulibala ukuba umntwana wakho usemngciphekweni. Ngokuqinisekileyo uya kukhula ukuba abe ngumntu wokwenene, ahloniphe yena nabanye.
Umntwana wesibini kwintsapho
Uqeqesho oluzonwabisa: idoli labantwana bakaWaldorf
Ukuvuthwa kwezesondo zamantombazana, impilo
Isimo sengqondo sabantwana emva kokuqhawula abazali
Iifoto ziphupha nge "Bach" uDanila Kozlovsky
Umntwana ubonakala njani kwiiveki ezintlanu zokukhulelwa?
Ukukhuselwa kwimizila enobungozi